Bisha Soo Socota Ayuu Dib U Furmi Doonaa Horyaalka Talyaaniga Ee Serie A Hadaba Xogtan Waxaan Ku Eegi Doonaa Xili Ciyaareedka Horyaalkaasi? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Bisha Soo Socota Ayuu Dib u Furmi Doonaa Horyaalka Talyaaniga Ee Serie A Hadaba Xogtan Waxaan Ku Eegi Doonaa Xili Ciyaareedka Horyaalkaasi?
Horyaalka kubadda cagta waddanka Talyaaniga ee Serie A ayaa dib u furmi doona sida uu qorshuhu yahay April 3, ka dib muddo bil ah oo loo joojiyey xanuunka Coronavirus ee dalkaas iyo waddamo kale oo badan ba aafeeyey.
Waddanka China oo uu Coronavirus kasoo bilaabmay, waxay hadda u muuqdaan inay xakamaeeyeen, laakiin Isniintii, waxa waddanka Talyaaniga dadka uu ku dhacay ay marayeen 24,747 qof oo 1,809 qof oo ka mid ah ay u geeiyoodeen.
Ka hor intii aanu xanuunkani carqaladaynin horyaalka waddanka Talyaaniga ee Serie A, waxa xorriyad dhinaca gool-dhalinta ah haysatay Atalanta oo wacdaro layaab leh dhigaysay, laakiin Lazio oo rikoodh guul-darro la’aan ah oo layaab leh samaynaysa ayaa horyaalka kula hirdamaysa Juventus iyo Inter Milan oo dagaalka ugu adag dhex-marayo, laakiin naadiga uu hoggaaminayo Simone Inzaghi waxay culays badan ku hayaan labada naadiba oo ay xattaa usbuucyadii ugu dambeeyey mar kala wareegeen hoggaanka.
Inter Milan ayaa muujinaysa inay dib u helaysa miisaankii iyo magacii ay hore u lahayd, iyadoo maamulka magaalada iyo magacii weynaana ka ridanaysa AC Milan oo kaalinta toddobaad soo haahaabanaysa, inkasta oo muddadii uu joogay Zlatan Ibrahimovic ay sare usoo kaceen.
Xog Uruurin laga sameeyey rikoodhada kooxaha iyo ciyaartoyga waaweyn ee horyaalka Serie A ee xili ciyaareedkan, ayaa waxay muujinaysaa in kooxaha qaarkood ay wacdaro dhigeen, kuwo kalena dhibaataysan yihiin.
Kooxda kubadda cagta Juventyus, lagama adkaanin garoonkeeda 34-kii ciyaarood ee ugu dambeeyey, waxaanay ku heshay 29 guulood iyo shan barbarro ah, waxaanay kala-badh ka sarraysaa Lazio oo kaalinta labaad ku jirta oo 15 ciyaarood guul-darro la’aan ku ahayd hoygeeda.
Cristiano Ronaldo waxa uu barbarreeyey rikoodhkii goolasha xidhiidhka ah ee taariikhda horyaalka Serie A, kaddib markii uu 11 gool saxeexay 11 ciyaarood oo isku xiga oouu ciyaaray. Waxa kale oo uu soo qabtay rikoodhkiisii goolasha ee xili ciyaareedkiisii hore inkasta oo uu dheelay sagaal kulan ka yar intii uu xili ciyaareedkii hore u saftay Juventus. Celcelis ahaanna kulan kasta waxa uu dhaliyaa 0.95 gool, halka xili ciyaareedkii hore uu ka ahaa 0.68.
Cristiano Ronaldo waxa kale oo uu noqday ciyaartoygii ugu degdegga badnaa ee Talyaaniga ka dhaliya goolashii ugu badnaa, waxaana 52 ciyaarood oo kali ah uu ku saxeexay 42 gool, hortiina waxa jiray Vincenzo Montella, Andriy Shevchenko iyo Ronaldo-hii reer Brazil oo 42 gool ku dhaliyey 58 ciyaarood.
Lazio lagama badinin 21-kii ciyaarood ee hore ee horyaalka, waxaanay soo urursadeen 17 guulood iyo 4 barbarro ah, waana rikoodhkii ugu wanaagsanaa taariikhda kooxdan ee ay ka samayso guul-darro la’aan intaas le’eg. Roma ayaa sidan oo kale samaysay xili ciyaareedkii 2009-10.
Lazio waxay soo dhalisay ugu yaraan laba gool muddo 19 kulan oo xili ciyaareedkan ag, waxaana kaliya ka rikoodh wanaagsan Liverpool oo 23 ciyaarood min laba gool soo dhalisay, Man City iyo PSG oo 21 ciyaarood ugu yaraan min laba shabaqa taabsiiyey.
Ciro Immobile oo hoggaaminaya gool-dhalinta horyaalka ayaa soo dhaliyey 27 gool 26 ciyaarood oo horyaalka ah oo uu saftay.
Antonio Conte ayaa noqday tababarihii ugu horreeyey ee Inter Milan hoggaamiya ee indhihiisu qabtaan kooxdiisa oo dhalinaysa goolal 19 ciyaarood oo dhamaan horyaallada ah, isla markaana guuleysata sagaal ka mid ah 13 ciyaarood oo ay bannaanka uga baxeen garoonkooda, laba barbarro ah iyo laba laga badiyeyna loo raaciyey.
Romelu Lukaku ayaa ka mid ah saddex ciyaartoy oo ugu yaraan 17 gool oo horyaalka ah dhaliyey xili ciyaareedkoodii ugu horreeyey ee ay u ciyaareen Inter muddo 25 kulan gudahood ah, waxaanu soo qabtay Giuseppe Meazza oo u ciyaari jiray Inter sannadihii u dhexeeyey 1929-30-kii iyo Stefano Nyers oo u ciyaari jiray 1948-49-kii.
Xili ciyaareedkan oo aan wali dhowayn, waxay Atalanta dhalisay 70 gool, waxaanay ku dhow dahay inay jabiso rikoodhkeedii ugu sarreeyey ee dhinaca gool-dhalinta ah ee abid ay la timid oo ahaa 77 gool oo ay samaysay xili ciyaareedkii hore.
Ma jirto koox horyaalka Talyaaniga ka dhalisay 70 gool 25 ciyaarood gudahood hal xili ciyaareed intii ka dambaysay sannadkii 1959-kii oo Fiorentina ay 79 gool dhalisay.
Saddex ciyaartoy oo ka tirsan Atalanta ayaa dhaliyey laba tiro-god oo goolal ah, waana Josip Ilicic, Luis Muriel iyo Duvan Zpata. Waxa ugu dambaysay Atalanta sidan oo kale xili ciyaareedkii 1949-50 iyo 1951-52-kii.
Tan iyo markii uu Stefano Pioli la wareegay tababarenimada AC Milan, waxay shabaqooda ilaashadeen kulamadii ugu badnaa oo aan wax goolal ah laga dhalinin, iyagoo toddoba kulan ka baxay garoonka iyadoo gool-hayahooda aanay kubbad daba-marin.
Tan iyo kulankiisii ugu horreeyey ee uu u ciyaaray Milan (laga soo bilaabo August 2010), Zlatan Ibrahimovic waxa uu dhaliyey 60 gool dhamaan tartamada, waxaanu waqtigan dib usoo nooleeyey afkooda hore oo mar kale noqday kuwo awood u leh inay goolal qurux badan dhaliyaan.
Kooxaha Fc Attackers Iyo Fc Ajax Ayaa Barbaro Wada Galay Tartanka SVO Academy Leage?